ATLETISMA – FIOFANANA :: Tafaverina any amin’ny ivon- toeran’i Maorisy i Todisoa Franck • AoRaha
ATLETISMA – FIOFANANA Tafaverina any amin’ny ivon- toeran’i Maorisy i Todisoa Franck
Isan’ireo atleta hiverina hiofana ao amin’ny ivon-toeram- piofanana iraisam-pirenen’i Maorisy i Todisoa Franck Rabearison, atleta malagasy mpiangaly ny hazakazaka 400m sy 400m misy fefy.
“Tamin’ny alalan’ny vatsy avy any amin’ny Confejes no nahafahany indray hiverina ao amin’ity ivon-toerana iraisam-pirenena ity”, hoy i Norolalao Ramanantsoa Andriamahazo, filohan’ny Federasiona malagasin’ny taranja atletisma.
Fotoana iray indray hoentin’i Todisoa hanatsara ny zava-bitany ka hahafahany mifaninana amin’ny Lalaon’ny Nosy 2019 hatao any Maorisy. “Hiezaka aho ny hanararaotra ny fiofanana mba hahafahana manamontsana ny zava-bita tsara indrindran’i Madagasikara (46’’86)”, hoy i Todisoa Franck. Mbola amin’ny fe-potoana 47’’56 no hanaovany ny hazakazaka 400m ankehitriny.
Talohan’i Todisoa Franck dia efa niofana tany Maorisy ihany koa i Hanitra Soa Olga Razanamalala, Djaovazaha Philippe, Riri Josveh, Florent Ravelomanana ary Ali Kamé, izay samy nitondra avo ny voninahitr’i Madagasikara tamin’ireo fifaninanana iraisam-pirenena maro.